August 11, 2019 - ThutaStar
ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ မွန်ပြည်နယ်ရယ်… ရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှ
ရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆို …ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ မွန်ပြည်နယ်ရယ်… ကျိုက်​သလ္လံအ​နောက်​​စောင်းတန်း မြို့​တော်​ဦး​ကျောင်းအနီး ​ကော်​ပြန့်​ရွက်​လုပ်​သည့်​​နေရာအ​ပေါ် …. နှစ်​ချို့ကုက္ကိုလ်​ပင်​ လဲပြိုကျ၍ လူ ၅ ဦးခန့်​ ပိမိ​နေ​ကြောင်းသိရ။ ဖယ်​ရှားထုတ်​ယူ၍မရ​သေးဟုသိရပါသည်​။ Han Lin Aung ရကှေီးလို့ဒုကျခရောကနြပေါတယဆြို …ဘယလြိုတှဖှစေနြတောလဲ မှနပြှညနြယရြယြ… ကွိုကြ​သလျလံအ​နောကြ​​စောငြးတနြး မှို့​တြော​ဦး​ကွောငြးအနီး ​ကြော​ပှနြ့​ရှကြ​လုပြ​သညြ့​​နရောအ​ပြေါ …. နှစြ​ခွို့ကုကျကိုလြ​ပငြ​ […]
အိမ်​​ထောင်​သည်​ မိန်းက​​လေးများ အထူးသတိပြုရန်
အထူးသဖြင့်​ အိမ်​​ထောင်​သည်​မိန်းက​​လေးများကို ရည်​ညွှ​န်းပါသည်​​ မ​နေ့ည​နေက ကျ​နော်​ထမင်းချက်​​နေတုန်းက cbက​နေ မိ​န်းက​လေးတ​ယောက်​ တုန်​တုန်​ရီရီနဲ့ အကူအညီ လာ​တောင်းတာကို ထိ​ရောက်​တဲ့ အကူအညီ​ပေးယင်းနဲ့ သတိရလို့ ဒီpost ကိုတင်​လိုက်​မိတာပါ ခုအဖြစ်​အပျက်​က တကယ့်​အဖြစ်​မှန်​ပါ ခံလိုက်​ရတဲ့ ကာယကံရှင်​အိမ်​​ထောင်သည်​​မိန်းက​လေး ကျ​နော့ friထဲရှိပါတယ်​ အသက်​ငယ်​ငယ်​​လေးပါ သူ့ acc ၂ခုကို […]
ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသား ၉၀ % ကြောက်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀) ခု
ဘယ်တော့မှ ဖွင့်မပြောတတ်ကြပေမယ့် အမျိုးသား ၉၀ % ကြောက်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၁၀) ခု အမျိုးသားတွေမှာ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါသလား? သူတို့ဟာ သန်မာပြီး ပြတ်သားတတ်ပုံ ပေါက်ပါတယ်။ “နည်းလမ်းမရှိဘူး” “ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး”ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ မိန်းကလေးများစွာ ပြောခဲ့ဖူးလိမ့်မယ့် […]
လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဝစီကံ နိမိတ်တွေကြောင့်လား
လတ်တလော ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ ဝစီကံ နိမိတ်တွေကြောင့်လား ဝစီကံနောက် နိမိတ်တွေ လိုက်ခြင်း “နိမိတ်”တွေဟာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ (၁) “စောက်ရမ်းတွေလမ်းပျောက်နေပါပြီ”ဆိုတဲ့… “နိမိတ်”က …”ရေကြီး ပြီး လမ်းတွေ ပျောက်”တယ်။ (၂ ) “ဖုန်ရှု လိုက်”ဆိုတဲ့ “နိမိတ်”က … “မြေပြို /မြေပိ” […]
ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဘိုကြီးကို အနှိပ်စက်ကြီးနဲ့ ဧည့်ခံခဲ့တဲ့ နေတိုး
ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ မင်းသားချောနေတိုးက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အခုချိန်ထိတိုင် အောင်မြင်မှုလမ်းမပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနေအေးပြီး တည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ နေတိုးကို ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်ကြသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အနုပညာမောင်နှမများကလည်း ချစ်ခင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးက လက်ရှိမှာတော့ သူချစ်တဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ပြင်ဦးလွင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် ရေမစီးတော့တဲ့ အကြောင်းအရင်း ပေါ်ပါပြီ…
ပြင်ဦးလွင် ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် ရေမစီးတော့၊…။ ။ ရေတံခွန် ဒုတိယအဆင့်တွင် မြေအောက်ဂလိ်ုုင်ပေါက် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခြင်းဟုဆို ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အနီးစခန်းအနီးရှိ ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်တွင် ယနေ့(သြဂုတ်၁၁)နေ့လည်ပိုင်းမှ စတင်ကာ ရေစီးကျမူမရှိတော့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။ ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်သည် သုံးဆင့်ရေတံခွန်ဖြစ်ပြီး ရေတံခွန် ပထမအဆင့်နှင့် ဒုတိယအဆင့်တွင် အနည်းငယ် ရေစီးဆင်းမူရှိသေ်ာလည်း ရေတံခွန်တတိယအဆင့်မှာမူ […]
ဗိုလ်လုပွဲတွက်သွားတဲ့ မြန်မာ့ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာဟာဆိုရင် အခုချိန် ဂရိနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဟယ်လက်စ်အိုးပင်း(Hellas Open)ကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲမှာ၎ နိုင်ငံပေါင်း (၄) နိုင်ငံ က ကြက်တောင်မယ်တွေကို အနိုင်ယူပြီးဗိုလ်လုပွဲ တက်ရောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ နိုင်ခြေအဆင့်(၃) သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ ကြက်တောင်မယ် ဖြစ်သူ သက်ထားသူဇာဟာ ပထမအဆင့်မှာ ဟန်ဂေရီ ကြက်တောင်မယ် မာဒါရက်ဇ်ကို […]
ရေ ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် ချမ်းချမ်း
ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် တတ်စွမ်းသလောက် ပါဝင်ကူညီပေးမယ့် ချမ်းချမ်းအတွက် ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အားသွန်ခွန်စိုက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ လိုက်ပြီး အလှူခံလို့နေပါတယ်။ ချမ်းချမ်းကတော့ သြဂုတ်လ(၁၂)ရက်နေ့မှာ ရေဘေးခံစားနေတဲ့ မော်လမြိုင်၊ ပေါင်၊ မုတ္တမဘက်က ပြည်သူတွေဆီသို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကိုလည်း သြဂုတ်လ(၁၁) ရက်နေ့ […]
ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် တွင်ရေ စီးဆင်းမှု မရှိတော့
ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန် တွင်ရေ စီးဆင်းမှု မရှိတော့ ပြင်ဦးလွင် ၊ သြဂုတ် ၁၁။ မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ ဓာတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်တွင် ရေ ကျဆင်းမှုမရှိတော့ကြောင်း ရေတံခွန်သို့ရောက်ရှိနေသည့် မရွှေပြည့်က ယနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်၊ နေ့လယ် ၁း၃၀ တွင် AHN သို့ပြောသည်။ “ […]
မွန်ပြည်နယ်ရေဘေးဒုက္ခရောက် အိမ်ထောင်စု ၃၀၀ အတွက် သိန်း ၁၂၅၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကိုကျော်မင်း + မသီသီလွင် (ရွှေပြည်နန်း မိသားစု)
လက်ရှိပြည်တွင်းရေကြီးမှုကတော့ သာမာန်ထက်ပိုမိုစိုးရွားလျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ရေကြီးမှုကြောင့် နေအိမ်များနစ်မြုပ်ခြင်း မြေပြိုခြင်းတွေနဲ့အတူ လူသေဆုံးမှုတွေလည်း များစွာရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆက်မပျက်မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့် မြစ်ရေတက်ကာ မြို့များစွာကိုရေဝင်ရောက်မှုများခဲ့ပြီး နေအိမ်စွန့်ခွာသူတွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ လက်ရှိ ပြည်တွင်းရေကြီးမှုတွေထဲက လူသေမှု၊ မြေပြိုမှု ရေဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ အဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ပုံရိပ်တွေကို အားလုံးတွေ့မြင်ကြမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွန်ပြည်နယ်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေတဲ့ ဒေသတွေမှာ အသက်စွန့်ကြိုးစားပေးလျှက် […]